उत्तर कोरियाली नेता किमको रुसी भ्रमणका एजेण्डा के-के हुन् ?| Nepal Pati
एजेन्सी । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिभर पुटिनसँग भेटवार्ताको लागि रुसमा छन् । किमको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भियतनाममा भएको शिखर वार्ता एक्कासी अन्त्य भएको सन्दर्भमा यो वार्ता हुदैंछ ।
बिहिबार रुस–उत्तर कोरिया नेताको भेटघाट भयो । विश्लेषकले यस भेटमार्फत किमले आफ्नो नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने अन्य शक्तिहरु अझै सो क्षेत्रमा रहेको सन्देश दिन खोजेको बताएका छन् ।
भियतनामको शिखर वार्ता रद्ध भएपछि किमले अमेरिकाबाट अपेक्षा गरेको प्रतिवन्ध फुकुवा पाउन असफल भए । उनले त्यो अभावलाई पुटिनसँगको वैठकबाट पुरा गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रले प्रतिबन्धको प्रस्ताव गर्दा भिटो लगाएको भए पनि रुसले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरिरहेको छ । तर रुसले पछिल्लो समय चीनसँग मिलेर उत्तर कोरियामाथिका प्रतिबन्ध न्यूनिकरण गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छ । उत्तर कोरियाले हतियार परिक्षणमा नियन्त्रण गरेकाले यस्तो सहुलियत दिनुपर्ने पक्षमा यी दुई राष्ट्र उभिएका छन् ।
रुस नै किन ?
रुससँगको उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध उसको स्थापना कालदेखिकै हो । १९५०–५३ को कोरियाली युद्धपछि मस्कोले उत्तर कोरियालाई पुनःनिर्माण गर्न सघाएको थियो । तत्कालिन समयमा दुवै राष्ट्रले साम्यवादी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएकाले पनि ती नजिक थिए ।
वर्तमान रुसी राष्ट्रपतिको उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध पुरानो हो । सन् २००० मानै प्योङयाङ भ्रमण गरेका पुटिनले वर्तमान नेताका पिता किम जोङ इलसँग केही पटक भेटेका पनि छन् ।
सोभियतकालिन रुसको उत्तर कोरियासँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो । तर सोभियत संघको पतनसँगै यसमा असर परेको थियो । तर पुटिनले यसलाई पुनः नविकरण गर्ने प्रयासमा छन् ।
उत्तर कोरियाले पनि रुसलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप नगर्ने पुरानो तथा विश्वसनीय छिमेकीको रुपमा हेर्ने गरेको एक उत्तर कोरिया विज्ञले बताए ।
रुसी भ्रमणका एजेण्डा के हुन् ?
रुसको शिखर वार्ताको लागि देश छाड्दै गर्दा किमका तत्कालिन चासो दुई वटा थिए । पहिलो त रुसमा रहेका उत्तर कोरियाली श्रमिकको मुद्दा हो भने अर्को उनको देशमा जारी खाद्य संकट पनि यसमा समावेश छ ।
रुसमा एक समय उत्तर कोरियाली श्रमिक ५० हजारसम्म पुगेका थिए । त्यहाँ अझै लगभग १० हजार उत्तर कोरियाली श्रमिकहरु काम गर्छन् । सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पास गरेको प्रतिबन्ध यस वर्षको अन्त्यमा लागु हुने भएपछि सबै उत्तर कोरियालीहरुले रुस छाड्नु पर्छ ।
रोयर्टस समाचार एजेन्सीले अवलोकन गरेको कागजात अनुसार रुसमा रहेका उत्तर कोरियाली श्रमिकले वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर देश पठाउँछन् ।
“किमको भ्रमण पछि यो संख्यामा कमी आउन बन्द हुन सक्छ,” मस्कोस्थित इन्स्टीच्युट अफ रिजनल इस्युका निर्देशक दिमित्री झुराभलेभले भने ।
तर श्रमिकहरुको उपस्थितीले रुसलाई पनि फाइदा गरिरहेको छ । भीमकाय राष्ट्र रुसका न्यून जनसंख्या रहेका प्रान्तहरुमा रहेको खेतमा खेतिपाती गर्न, काठ चिरानी गर्न , खनिज उत्खनन गर्न कमी भएका श्रमिकलाई यिनले पुरा गरिरहेका छन् ।
किमले मस्को भ्रमणका क्रममा खाद्य संकटको कुरा पनि उठाउनेछन् । यस गृष्ममा देखिन सक्ने खाद्य संकटमा रुसले मानवीय सहायता प्रदान गर्ने रुचि देखाएको छ ।
यसैलाई ध्यान दिएर रुसले अघिल्लो महिना उत्तर कोरियामा २००० टन गहुँ पठाएको थियो ।
के चाहन्छ रुस ?
क्रेमलिनले भने किमको भ्रमणलाई कोरियाली आणविक संकटमा प्रमुख विकास बताएको छ ।
“भ्रमणको मुख्य ध्यान कोरियाली प्रायद्विपको आणविक समस्याको राजनीतिक र कुटनीतिक समाधान हुनेछ,” पुटिनका सहयोगी युरी एशकोभले मंगलबार एक पत्रकार सम्मलेनका क्रममा भने ।
शुक्रबार पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले दुई नेताले ‘द्वीपक्षीय सम्बन्ध’ छलफल गर्ने जानकारी दिए । यसमा ‘आणविक निशस्त्रीकरण, क्षत्रिय सहकार्य’ जस्ता कुरा प्रमुख हुने उनले बताए ।
पुटिनले विगतदेखिनै वासिंगटनले कोरियामाथि थोपरेको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्ट छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिन चीनको राजधानीमा आयोजना हुन लागेको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसियटिभ्ससम्बन्धी महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय वैठकमा भाग लिन जादैछन् । विज्ञहरु यसै कारणले उनले अहिले नै कुनै नयाँ प्रतिबद्धता नगर्ने बताएका छन् ।
भ्रमणबाट किमले के पाउनेछन् ?
उत्तर कोरिया चीनमाथि रहेको आफ्नो आर्थिक निर्भरता कम गर्नको लागि पनि रुससँग आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ ।
‘रुसले उसको अर्थतन्त्रमा के गर्न सक्छ भनेर किमले बुझ्नु आवश्यक छ ,’ रुसका पूर्व उप–विदेश मन्त्री एण्ड्रे फ्योदोरोभले भने , ‘रुस र चीन बीना, उत्तर कोरियाले कुनै पनि संकटबाट पार पाउन असम्भव छ ।’
उत्तर कोरिया उसको प्रमुख व्यापरिक सहयात्री चीनसँग लामो समयदेखि परनिर्भर छ ।
किमले आफ्नो दक्षिणी छिमेकी दक्षिण कोरियालाई अन्तर–कोरियाली परियोजनामा सहभागी हुनको लागि दवाव दिइरहेका छन् । यसका पछाडि पनि देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु रहेको विज्ञहरु बताउछन् ।
अधिकारीका अनुसार रुस र उत्तर कोरियाबीचको व्यापर सन् २०१७ मा ६ करोड अमेरिकी डलर भएकोमा, एक वर्षपछि घटेर ३.४ करोड अमेरिकी डलरमा पुग्यो ।
उत्तर कोरियाले विगतदेखिनै रुससँग युरोप जोड्ने रेल रुटजस्ता ठूला परियोजनाको कुरा उठाइरहेको छ ।
अमेरिका–उत्तर कोरियाबीचको वार्तामा असर गर्ला त ?
भियतनामको वैठक उत्तर कोरियाली र अमेरिकी नेताबीच दोस्रो वार्ता थियो ।
अघिल्लो वर्ष भएको ऐतिहासिक बैठक सामान्य सहकार्यको वक्तव्य जारी गर्दै सकिएको थियो । त्यसले कुनै ठोस परिणाम दिन सकेन ।
“मस्को र प्योङयाङबीचको बैठकले वासिंगटन र प्योङयाङबीचको बैठकलाई कुनै असर गर्दैन ,’ कोरिया इन्टीच्युट अफ नेसनल युनिफिकेसनका वरिष्ठ अद्यता चो हान बमले भने ।
‘यसले कुनै परिणाम पनि दिने छैन । हालसालै उत्तर कोरियाको लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टेफन बेइगनले रुसको भ्रमणमा गएका थिए । उनका साथ उप विदेशमन्त्री पनि थिए । उनीहरु मार्फत ट्रम्पले आफू उत्तर कोरियाको आणविक समस्या चरणवद्ध समाधान गर्ने पक्षमा नरहेको सन्देश पठाएका थिए,’ चोले भने ।
– अल जजिराबाट भावानुवाद